ခဏအလည်လာတဲ့ ဧညျ့သညျ – Shinyoon
October 26, 2020 by Shinyoon
ဧညျ့သညျ . . .
လူတဈယောကျ ကိုယျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာရုံနဲ့ ဒီလူက ငါ့အတှကျပဲလို့အပိုငျမတှကျတတျတဲ့ အကငျြ့လေးကို ဖြောကျပါ ။ ဒီလူတော့ ငါ့ဘဝထဲက တဈသကျလုံးထှကျမသှားပါဘူးဆိုတဲ့ ယုံကွညျခကျြကွီးကို ဖြောကျပါ ။ ဒီလူနဲ့ပဲ အိုမငျးခငျြတယျဆိုတဲ့ အစှဲအလမျးကွီးကို ဖြောကျပါ ။
လူတှေ ကိုယျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာကွတယျဆိုတာ ရညျရှယျခကျြအမြိုးမြိုး အကွောငျးအမြိုးမြိုးရှိတယျ ။ တခြို့က ခဏလာပွီး နားတာ အစာရှာတဲ့ငှကျတှလေိုပေါ့ အတောငျငွောငျးလို့ခဏအနားခံလိုကျရတဲ့ သဈကိုငျးလေးတဈခုထကျမပိုဘူး ။ သူ ဒီနရောမှာ ခဏပဲနားတာ ပွီးရငျ သူလိုရာကို ဆကျပွီး ပြံသှားတော့မှာလေ ပွနျတောငျ လှညျ့ကွညျ့ဖျောရမှာ မဟုတျဘူး ။
တခြို့ကတြော့ ကိုယျ့အနားမှာ သူတို့လိုခငျြတာရှိနတေဲ့အတှကျ ကိုယျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာခဲ့ကွတာပါ ။ ပြျောစရာပဲဖွဈဖွဈ အကူအညီပဲဖွဈဖွဈ သူတို့လိုခငျြတဲ့အရာတဈခုခု ရှိနသေရှေ့ မငျးဘဝထဲက သူတို့ဘယျတော့မှ ထှကျသှားမှာမဟုတျဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လိုခငျြတာတှေ ရပွီးသှားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ သူတို့လိုခငျြတဲ့အရာတှေ မရှိတော့တဲ့အခါ မငျးဘဝထဲက ထှကျသှားကွလိမျ့မယျ ။
တခြို့လူတှကေကတြော့ ကိုယျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာတာ ထူးဆနျးတယျ အစှဲအလမျးကွီးတတျကိုယျ့ကို နောကျထပျဘယျတော့မှ မစှဲလနျးစဖေို့သငျခနျးစာတှေ ပေးဖို့ဝငျလာခဲ့တာလေ ။ အစပထမ သူကိုယျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာခဲ့တုနျးက ကိုယျ့မှာ ပြျောရှငျရတယျ ပွီးတော့ ကွညျနူးရတယျ တဖွေးဖွေးနဲ့ နှေးထှေးသလိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာ ခွရောတောငျမခနျြပဲ အပွီးအတိုငျ ထှကျသှားခဲ့တာလေ ကိုယျ့မှာ မကျြရညျနဲ့ မကျြခှကျ ။ ရညျမှနျးခကျြတှလေဲမဲ့ပွီး ဘဝမှာ အသကျရှငျနရေတာကိုတောငျ အဓိပ်ပါယျတှေ မဲ့လာတဲ့အထိ နာကငျြခံစားခဲ့ရတာပေါ့ ။ ဒါပမေယျ့ စာတှတေော့တျောတျောတတျခဲ့ပါတယျ ။ လူတှေ ကိုယျ့ဘဝထဲကို ဝငျလာရုံနဲ့ ပွနျမထှကျသှားတော့ဘူးလို့တသတျမတျထဲ တှေးပဈလိုကျလို့မရမှနျး စာတှတေတျလာခဲ့တယျ ။
ဒီလိုလူတှကေို ဘဝရဲ့ ဧညျ့သညျလို့ချေါပါတယျ ။ ဧညျ့သညျဆိုတာ အခြိနျတနျရငျပွနျသှားကွမှာ ကိုယျက အိမျရှငျပဲ တတျနိုငျသလောကျလေး ဧညျ့ဝတျကပြေေးလိုကျ အဲ့ဒီထကျတော့ ဘာမှမမြှျောလငျ့ထားနဲ့ ။ ခဏခဏဆုံရတဲ့ဧညျ့သညျတှလေဲ ရှိလာလိမျ့မယျ ခဏတဈဖွုတျပဲ ကွုံရတဲ့ ဧညျ့သညျတှလေဲ ရှိမယျ ဘယျလို ဧညျ့သညျမြိုးကိုမဆို ကိုယျ့ဘကျက ဧညျ့ဝတျကပြေေးလိုကျပါ ။ ပွနျသှားမယျမှနျးသိရငျ အစှဲအလနျးထားဖို့မလိုတော့ဘူး ။ ကိုယျ့ဘကျက ဘာကိုမှ မမြှျောလငျ့ထားရငျ ကိုယျ့ဘကျက နာကငျြစရာလဲ မလိုတော့ဘူး ။
အဓိက က ဧညျ့သညျကို ဧညျ့သညျမှနျးသိဖို့ပဲလိုတာပါ ။
ဧည့်သည် . . .
လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာရုံနဲ့ ဒီလူက ငါ့အတွက်ပဲလို့အပိုင်မတွက်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးကို ဖျောက်ပါ ။ ဒီလူတော့ ငါ့ဘ၀ထဲက တစ်သက်လုံးထွက်မသွားပါဘူးဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြီးကို ဖျောက်ပါ ။ ဒီလူနဲ့ပဲ အိုမင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်းကြီးကို ဖျောက်ပါ ။
လူတွေ ကိုယ့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာကြတယ်ဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုး အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် ။ တချို့က ခဏလာပြီး နားတာ အစာရှာတဲ့ငှက်တွေလိုပေါ့ အတောင်ငြောင်းလို့ခဏအနားခံလိုက်ရတဲ့ သစ်ကိုင်းလေးတစ်ခုထက်မပိုဘူး ။ သူ ဒီနေရာမှာ ခဏပဲနားတာ ပြီးရင် သူလိုရာကို ဆက်ပြီး ပျံသွားတော့မှာလေ ပြန်တောင် လှည့်ကြည့်ဖော်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ။
တချို့ကျတော့ ကိုယ့်အနားမှာ သူတို့လိုချင်တာရှိနေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာခဲ့ကြတာပါ ။ ပျော်စရာပဲဖြစ်ဖြစ် အကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခု ရှိနေသရွေ့ မင်းဘ၀ထဲက သူတို့ဘယ်တော့မှ ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုချင်တာတွေ ရပြီးသွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေ မရှိတော့တဲ့အခါ မင်းဘ၀ထဲက ထွက်သွားကြလိမ့်မယ် ။
မိန်းမသားတို့အတွက် ကျွန်မဘဝနှင့်ရင်းပြီးရခဲ့သော သင်ခန်းစာများ – သျှင်ယွန်း စာအုပ် City Mart နှင့် Ocean ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ
တချို့လူတွေကကျတော့ ကိုယ့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာတာ ထူးဆန်းတယ် အစွဲအလမ်းကြီးတတ်ကိုယ့်ကို နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှ မစွဲလန်းစေဖို့သင်ခန်းစာတွေ ပေးဖို့ဝင်လာခဲ့တာလေ ။ အစပထမ သူကိုယ့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာခဲ့တုန်းက ကိုယ့်မှာ ပျော်ရွှင်ရတယ် ပြီးတော့ ကြည်နူးရတယ် တဖြေးဖြေးနဲ့ နွေးထွေးသလိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာ ခြေရာတောင်မချန်ပဲ အပြီးအတိုင် ထွက်သွားခဲ့တာလေ ကိုယ့်မှာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ။ ရည်မှန်းချက်တွေလဲမဲ့ပြီး ဘ၀မှာ အသက်ရှင်နေရတာကိုတောင် အဓိပ္ပါယ်တွေ မဲ့လာတဲ့အထိ နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် စာတွေတော့တော်တော်တတ်ခဲ့ပါတယ် ။ လူတွေ ကိုယ့်ဘ၀ထဲကို ၀င်လာရုံနဲ့ ပြန်မထွက်သွားတော့ဘူးလို့တသတ်မတ်ထဲ တွေးပစ်လိုက်လို့မရမှန်း စာတွေတတ်လာခဲ့တယ် ။
ဒီလိုလူတွေကို ဘ၀ရဲ့ ဧည့်သည်လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ဧည့်သည်ဆိုတာ အချိန်တန်ရင်ပြန်သွားကြမှာ ကိုယ်က အိမ်ရှင်ပဲ တတ်နိုင်သလောက်လေး ဧည့်ဝတ်ကျေပေးလိုက် အဲ့ဒီထက်တော့ ဘာမှမမျှော်လင့်ထားနဲ့ ။ ခဏခဏဆုံရတဲ့ဧည့်သည်တွေလဲ ရှိလာလိမ့်မယ် ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲ ကြုံရတဲ့ ဧည့်သည်တွေလဲ ရှိမယ် ဘယ်လို ဧည့်သည်မျိုးကိုမဆို ကိုယ့်ဘက်က ဧည့်ဝတ်ကျေပေးလိုက်ပါ ။ ပြန်သွားမယ်မှန်းသိရင် အစွဲအလန်းထားဖို့မလိုတော့ဘူး ။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ထားရင် ကိုယ့်ဘက်က နာကျင်စရာလဲ မလိုတော့ဘူး ။
အဓိက က ဧည့်သည်ကို ဧည့်သည်မှန်းသိဖို့ပဲလိုတာပါ ။
လူတှကေ လှယျလှယျလေးရရငျ တနျဖိုးမထားကွဘူးလေ
မိနျးမသားပဲလဆေိုပွီး ပြော့ညံ့နလေို့ မရဘူး